Badweyntimes.com » Musharaxiinta Xilka M/weynaha oo intooda badan qaadacay Dooda Musharaxiinta…Badweyntimes.com
Musharaxiinta Xilka M/weynaha oo intooda badan qaadacay Dooda Musharaxiinta…
Barqanimaddii maanta, waxaa Golaha Shacbiga Qaranka ka bilaabantay Barnaamij Tebin Toos ah oo xubno ka tirsan Murashxiinta Madaxweynaha wax looga weydiinayo Su’aalo Furan oo ku xiriirsan Qorshaha Murashax kaste ee Ajendaha uu dalka ku hoggaamin doono.
Weriye Yuusuf Xasan ayaa daadihinayo Barnaamijkaasi, iyadoo su’aalaha loo qeybinayo 3 Murashax Madaxweyne oo ka mid ahaa 11-kii Murashax ee ku qornaa inay ka qeyb galaan Barnaamijkaasi.
Saddexda Murashax ee soo xaadirtay Madasha lagu weydiinayo Su’aalaha ayaa kala ah: Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, Bashiir Raagge Shiiraar iyo Axmed Maxamed Cabdi,
Murashixiinta waxaa si wadajir loo weydiinayaa 5 Su’aal, oo ay ugu muhiimsan tahay inuu Murashax kasta sheego Xogta Hantida uu leeyahay ee isugu jirta Guurto iyo Ma-guurto.
Ma cadda sababaha ay Murashixiinta kale u qaadaceen Doodda Maanta, iyadoo la og yahay inay horey ugu ololeynayeen Doodda Tebinta Tooska ah ee laga daawanayo Telefishinadda ku hadla Afka Soomaaliga.
Dhinaca kale, 12-Murashax Madaxweyne ayaa la filayaa inay gelinka dambe ee maanta ka qeyb galaan Su’aal-weydiinta Murashixiinta ee Tebinta Tooska ah, balse ma muuqdaan ifafaalo ay inta badan Murashixiintaasi ku so oxaadari doonaan Madasha.
Si kastaba ha ahaatee, Waa markii ugu horreysay oo Murashxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha wax laga weydiiyo arrimo ku aadan Hantidiisa Khaaska, iyadoo la og yahay yahay inay Murashixiinta ku adag tahay in laga faaf-reebo, loona diiwaan-geliyo Hantida uu yeeshay ka hor inta uusan qabanin Xil Qaran.
Arrag Sawirada: Xaruunta Lagu Qaban doono Doorashada M/weynaha oo la diyaariyay…
Akhriso Dooda Musharaxiinta & Su’aalaha la hordhigayo oo isku mid ah Balse…